Kana iwe uri Apple fan, iwe unofanirwa kuona ino webhusaiti | Ndinobva mac
Kana iwe uri Apple fan, iwe unofanirwa kuona ino webhusaiti
Chimwe chezvinhu zvinoshandiswa nevashandisi veApple vanonyanya kuda kugona kupfeka t-shati yekuyeuchidza kana kuwedzera chinamirwa chinoratidza chigadzirwa chemufananidzo weCompertino firm. Zvine musoro mumusika uripo pane nzvimbo dzinoverengeka kwaungawana kapu, T-shati kana chinamirwa neApple asi nzvimbo yakanakira iyi ndeye Throwboy.
La Chitoro chevakakanda inokupa dzinoverengeka zvigadzirwa inoenderana neApple, mameseji ayo anozivikanwa uye mamwe. Iyi webhusaiti yanga ichishanda kwenguva yakareba iri kuvandudza zvigadzirwa zvayo uye nekutenda kuMacRumors vashandisi vazhinji vakaona nhau dzavanadzo izvozvi maererano nereferensi yeApple.
T-shirts, ngowani ine iyo cmd kiyi logo, makushingi, sweatshirt uye nezvimwe. Iri peji rakanakira vashandisi ve "geeky" veApple uye tine chokwadi chekuti vazhinji vacho vaitozviziva kare. Ini pachangu ndakanga ndisingazive nezve kuvapo kwayo asi ndinofanira kutaura kuti pane zvinhu zvandaifarira uye iwe unogona zvakare kuwana ese marudzi ese saizi. Iko kusarudzika kwema t-shirts, semuenzaniso, kune hutsinye uye ivo vanopa imwe ngano na1984 kana Iconic kumberi mune epakutanga Apple mavara.
Ivo havatarise chete kune izvo Apple zvinangwa, pane peji iwe unowana mamwe marudzi ezvigadzirwa zvine chekuita neano fungidzira Game Boy, iyo Youtube logo, iyo Finder logo pamutsago nezvimwe ... Chinhu chakaipa mune izvi ndechekuti Izvo hazvisi zvakachipa zvigadzirwa uye iwe zvakare uchafanirwa kuwedzera iyo yekutumira mutengo izvo zvisingadhuri kutaura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Kana iwe uri Apple fan, iwe unofanirwa kuona ino webhusaiti
Kutenga makambani anotongwa neApple kubva 2016 kusvika 2020
Yemahara nhasi paApple TV +: 12 Varume Vane Hasha: Chokwadi Nhau dzeKuva Munhu Mutema muAmerica Nhasi